Banyere Anyị - Zhao Hongsheng mkpuchi akpa Co., Ltd.
Shenzhen Zhaohongsheng Handbags emeputa e guzobere 2008 dị ka ọdịdị taxer. E sub-alaka ụlọ ọrụ mmepụta ihe aha ya bụ Shenzhen Zhaohongsheng gwara mmanụ luggle na akpa ụlọ ọrụ. Anyị na ngwaahịa bụ thermal akpa, Pizza bag, nri nnyefe akpa, kpụ ọkụ n'ọnụ Pizza akpa, mma akpa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ụgwọ wallet, Menu clip. Anyị na ngwaahịa na-n'ọtụtụ ebe, ngwa na nri, na nkà mmụta ọgwụ, nri, oyi na-atụ yinye nkesa. Nke a bụ ihe mbụ na enterpriser na imewe na-emepụta gwara mmanụ nri nnyefe akpa. Ugbu anyị ngwaahịa ndidi nile na akuku nke Chinese ahịa, na exported na n'ụwa nile.
ị pụrụ ịhụ anyị ngwaahịa n'ebe nile China market.volving dị iche iche gbara akwụkwọ na mbupụ oversea na ụwa. Anyị na-e-edebe ogologo imekọ ihe ọnụ na nri nri na oyi na-atụ yinye nkesa stably. The "Zhaohongsheng" ika inthermal akpa bụ nnọọ n'ime obi nke ndị mmadụ. Àgwà nke ngwaahịa na ọrụ e kwetara site ọha mmadụ.
Na ịgbasa ahịa nọgidere, mbụ factory bụ ike a chọrọ n'aka si ahịa. Anyị ụlọ mmepụta ihe kpọgara na No 35, Anxing Road, Henggang n'okporo ámá ụlọ ọrụ Shenzhen on May 2017.It bụ mma-dị na mfe nke ohere (conveniently ọnọdụ). New fabulous ebe e biri 5000 square mita maka omumuihe. The zuru okè akụrụngwa nwere ezigbo owuwu tinyere na uru na gburugburu ebe obibi ọrụ na ndụ.
Enterpriser mgbaru ọsọ: Professional, iguzosi ike n'ezi, ụlọ ahịa isothermal akpa, talent ọzụzụ isi
Enterpriser echiche: Professional, ezi okwukwe, elu àgwà, elu arụmọrụ, kacha mma price na pụrụ ịtụkwasị obi
Service ebumnuche: Dabere na nkà na ụzụ ọhụrụ site na nnukwu-ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ mmepụta iji belata-akwụ ụgwọ, na kasị mma na ndị kasị oké ọnụ price na kasị zuru okè ọrụ ga-nyere kacha mma mma, ọgaranya ngwaahịa unceasingly
ahịa dabeere, iwebata elu technology, na ngwá na anya, ma na-ewusi R & D ikike
All ihe kwes mkpuchi akpa na ahịa pụrụ iche nke a pụrụ ịchọta ebe
ọ bụla nke isothermal akpa ihe ọ bụla ahịa pụrụ iche nke ga-hụrụ ebe a
Adress: No 35, henggang n'okporo ámá longgang district
Ekwentị: + 86-755-84006330
Foreign ahia bụ gbanyụọ ezi mmalite, bú ...